Bird Ukudoba - akuwona ndaba sokusinda kulabo yaphelela zasendle ngaphandle kokusungulwa kwemishini emisha impucuko. Indlela yokwenza isicupho izinyoni abanesifiso labo abafuna ukuletha kubo kusayithi lakho (nakuba kuleli cala kunengqondo awayengele), ornithologists amateur noma labo abafisa ukuba bafake okufanayo blue-tits endlini yakhe. Ungakwazi Yiqiniso, uya esitolo isilwane, kodwa ezithakazelisayo kakhulu ukubamba ikusasa isilwane yabo.
Singasho, bakudala kakhulu, kodwa ngempumelelo. Ngaphambi indlela yokwenza isicupho izinyoni aphume ibhodlela, nquma ukuthi sayizi inyamazane yakho. Uma ufuna ukubamba intendele, thatha ibhodlela ezimbili-litre, uma into encane - inyoni noma undlunkulu, izingalo isigamu-litre. Umqondo wukuthi le nyoni ayinaso isikhala esanele ukuze ubonise amaphiko. Futhi njengoba isimiso ilula Bamangala Ukuvalwa ukusika entanyeni ibhodlela ukunwetshwa, lezi zinsalela ziyavezwa ukuthi wemba phansi futhi phansi wathela lolo. Ukuya phansi yamabele, isizinda sakho aphume isicupho bengayi.
Catching ikhabethe noma ibhokisi
Okungenani indlela esiphansi, nakuba lokhu kudinga ukulungiselela xaxa. Labo umqondo kancane indlela yokwenza isicupho izinyoni kusukela ebhokisini, wenze amanye amaphutha ejwayelekile ukuthi umphumela noma ngisho ukuhlala ngaphandle ukukhiqizwa, noma ukuchitha wakhe uthwebule isikhathi angamukelekile eside. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile ukunganakwa nge birders ongenalwazi kakade ethumba izinyoni. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ucabange kusengaphambili ukuthi yini uyothatha umhlalaphansi ukubamba inyoni, ngakho indlela yokwenza isicupho izinyoni - kuyigxathu, ngoba futhi kuyadingeka ukuze uthole ukukhiqizwa ngaphandle kokuyekethisa ngokwabo futhi enezimpiko. Ukuze wenze lokhu, usike ogangeni emnyango ibhokisi (nje isandla aphethwe, engasekho), futhi fixed okwesikhashana ne Yesigcilikisha tape. Ibhokisi ubekwe isivalo uhlezi phezu eyodwa emaphethelweni iflaya, okuyinto uboshelwe line ukudoba amamitha amathathu ubude - kangangokuthi izinyoni akuzona kakhulu ukuba khona kwakho. Degree engela - akukho ezingaphezu kwezingu-30, ngaphandle kwalokho emincanyana isikhathi ukukhiqizwa ukundiza ahambe, kuyilapho kukhona nesihibe slam. Ngasekupheleni odongeni kude kuthululwe Lure - futhi thina kuphela silinde. Lapho ukukhiqizwa kuzoya ngaphansi kwebhokisi, emgqeni evele jerks, futhi ibhokisi ihlanganisa inyoni.
Mhlawumbe akusiwona ngempela indlela ethembekile, kodwa eziphumelelayo. Nokho, ngaphambi kokwenza isicupho izinyoni esebenza ngogesi zabo, khumbula ukuthi kuyaphumelela kuphela ngosuku lokuqala. Khona-ke izinyoni ziyakudla undizisa isikhathi eside eceleni kwakhe, kuze kube yilapho usuqiniseka ukuthi akukho ukwelelesa ngaphezulu. Element kufanele ivalwe nxazonke ngaphandle koyedwa. Ngakolunye uhlangothi yokungena emnyango senziwa - noma ephansi, noma uthanda Ibhuloho eliphakanyiswayo elingena ku isiphethu. "Trigger" kungaba umuntu enentambo ukudoba kuboshelwe umnyango ukufinyelela futhi likhala, wokudela ke, lapho sizwa inyoni. Le ndlela zendlela yokwenza isicupho ekhaya izinyoni, Yiqiniso, lokhu kudinga eziningi umzamo, manual amakhono zabasebenzi kanye umsebenzi wobunjiniyela, kodwa okuhlala isikhathi eside futhi zisebenza kahle. Ngaphezu kwalokho, kungase kudlule bengonozulane, futhi indawo kwesihlahla kuqinisekisa nibambe njalo.
Eshibhile futhi bejabule: glue
Mangisho ukuthi akukhona ngempela Siwohloza kwamanye amadivayisi, uma "ukuzingela" ezinyonini encane. Yasungulwa indlela elihlakaniphile nengebuhlungu ukwenza isicupho izinyoni ngaphandle izakhiwo ezengeziwe. Uqala, ukuyengela wabasondeza ezinye seliyatholakala ukuthi zilale - noma ngokuqondile abethelwe perch legatsha. Kokusuthisa noma ngaphambi izinyoni ukujwayela ukuhlala "kokwehla pad". Kwaba esona yaphahlekwa unamathisele, ukwenziwa kusukela kunoma iyiphi okusanhlamvu okunesitashi. Njengoba siwela ogibeni, inyoni linamathela imilenze ayikwazi ukundiza. Ngesikhathi esifanayo ukunakekela kwakhe iphambukisa isisindo kakhulu, okuyinto cruise iziboshwa baqala Peck. Gqoka amagilavu esindayo ukuvikela izandla zakho, futhi uqoqa "sokuvuna."
indlela Unconventional: duck ku ithanga
Ukuze Waterfowl umbuzo zendlela yokwenza isicupho izinyoni ixazululwe indlela ngokuphelele ezahlukene. Isicupho endoda ngokwayo, into kuphela okudingeka akwenze - esingalindelekile. Ngenxa yale njongo, ithanga elikhulu esithathwayo, unqunywa, wasusa zonke uginindela slotted izimbobo indawo. I ingaphakathi inamathela ikhanda lakhe, indoda iza emanzini kancane uhamba towards ukukhiqizwa esizayo. Ukuze ususe kusuka ohlangothini wakhe zonke izinhlobo izinsolo emanzini asogwini we pre-ukusebenzisa i-amathanga ambalwa. Ducks ekuqaleni ngomkhumbi lisuka kubo, khona-ke Polyubopytstvuyte, xhoxha ngoqhwaku lwawo, futhi ayeke ukunaka imifino. Ngaphandle kokwenza ukunyakaza kungazelelwe, ukuze kuhambisane Ngokwesibonelo akhethiwe, ngoba sokudonsa bese udonsa imilenze phansi. Ingabe simelane ngamandla, ukuze kumelwe kube nzima ukugcina - uyaphinda futhi amagilavu.
Opharetha Ukuhlolwa passport
Indlela enhle ukusho "Sawubona," kusho intombazane ngamazwi akho. izifiso ezinhle ozithandayo